Bad boy - Thandar Yu Nge - Wattpad
167K Reads 19.9K Votes 31 Part Story
By ThandarYuNge Ongoing - Updated Aug 19, 2017
ဟင့်အင်း ... Oh Sehun  မင်းပြောပြောနေတဲ့ အချစ်က ဒီလိုပုံစံမဟုတ်ဘူး ... မင်းက အနိုင်လိုချင်လို့ငါ့ကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့တာ ... မင်းရဲ့ ပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့အတ္တကို အချစ်လို့ အမည်တပ်ခဲ့တာ ... တကယ်တမ်းအချစ်က အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး ... မင်းတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ကြားမှာ ငါကမြေစာပင်ဖြစ်ခဲ့တာ ... မလိုချင်ဘူး အဲ့လိုအချစ်မျိုး ငါမလိုချင်ဘူး ...  ငါ့ကိုလွှတ်ပေးပါ ... ကျေးဇူးပြုပီး ငါ့ကိုလွှတ်ပေးပါ
မလွှတ်ပေးဘူး ... လုံးဝမလွှတ်ပေးနိုင်ဘူး ... ခင်များကိုလွှတ်ပေးတဲ့နေ့က ကမ္ဘာပျက်တဲ့နေ့ပဲ ... ခင်များပြောသလို ပိုင်ဆိုင်ချင်လို့သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာလဲ အချစ်ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမဟုတ်ဘူးလား ... ချစ်လို့ ပိုင်ဆိုင်ချင်တာပဲ ... စောင့်ကြည့်နေ ခင်များစောင့်ကြည့်နေလိုက် ... ကျုပ်ရဲ့အချစ်ကို သက်သေပြပီး ခင်များရဲ့ အချစ်ကိုရအောင်ယူပြမယ် ...
Just look forward Luhan !!
>>>>>>> Bad boy <<<<<<<<
ဒါက နောက်ထပ် new fic လေးပါ  အရင်ကဟာတောင် မပီးသေးတာ နောက်ထပ်အသစ်ထပ်ရေးတယ်နော် ... ဒီအာသာတော်တော် အငြိမ်မနေတာဘဲ ... hee  ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အားပေးကြပါဦး ဒီ fic ကတော့ အရင်လို sweet ချည်းမနေဘဲ နည်းနည်းကွဲပြားမှာပါ sweet တာလဲ ပါမည်ပေါ့...
Erigonjongin Sep 09, 2017
Hello I'm Luhanဖတ်​ဖူးလားauthor😁😁😁
ExoLove726 Jun 06, 2016
Lovely_That_Rose0794 Jun 16, 2016
Wow ရမ်းမိုက်​တယ်​ ​ကြိုက်​ပါတယ်​ဂျ မြန်​မြန်​ဒိတ်​​ပေးရင်​ပို​တောင်​​ကောင်း​သေး😁😁
ByunHannieHnin Jun 06, 2016
myintmoe Jun 05, 2016
Daebak!!! Intro နဲ့တင်​ ဖတ်​ချင်​​နေပြီ pali update​ပေးပါ
EmSOh_24 Dec 20, 2016
ဟဲ့ ခြိမ်းခြောက်တာကလည်း ငါအပုသွသူနေပါစေဟက် :3
59.9K 5K 70
Arjushi And Baby Lu [Completed]
60.6K 5.4K 254
Arjushi and Baby Lu
131K 11.4K 396
80.6K 10.4K 917
Hun ah ~ မင်း သိလား?
တစ်ချို့ အချစ်တွေက ပေါင်းဖက်ဖို့ ကံကြမ္မာ မပါခဲ့ဘူး ~
> Sorry , My Bae <
50.8K 4.3K 185
HunHan , SeLu (Yaoi)
179K 18.9K 1.3K
197K 22K 868
Luhan : "sehun...မင်းအပေါ်ထားတဲ့ငါ့ရဲ့အချစ်တွေကRomeoထက်ကိုအများကြီးသာတယ်..မင်းပတွက်ဆိုအသက်ကိုတောင်စွန့်လွှတ်ပေးနိုင်သလို..ဘ၀ကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့လည်းငါလဲနိုင်တယ်...မင်းကငါ့အတွက်အရာအားလုံးပါ...."
Sehun : "မင်းငါ့အတွက်အသက်စွန့်ပေးစရာမလိုဘူးLuhan... မင်းငါ့အတွက်အသက်စွန့်ပေးစရာမလိုသလို...Romeo လည်သဖြစ်ပေးစရာမလိုဘူး..ငါကသာမင်းအတွက်Leonardo ဖြစ်စေမှာပါ...ရက်စက်တဲ့ကံကြမ္မာအတွက်တစ်ယောက်ကပဲစွန့်လွှတ်ပေးရင်လုံလောက်ပီမဟုတ်လား....."
60.2K 8.4K 1.1K
ဒီလိုဆို ကျနော်ကလွဲပြီး နောက်ထပ်
ဘယ်သူမှ မရှိနိုင်တော့ဘူး မလား???
HunHan || SeLu
27.9K 3.2K 118
~ Officially Love You ~
29.9K 3K 87
Title - Officially Love You
Main Cast - Sehun,Luhan
Supporting cast - Tao
Genre - Romance,Angst,Friendship
Style - Boys Love, Fan Fiction
Written by - Rubydeer HsuHan
ပြီးဆုံးသွားပြီ ။ အခန်းလေးကတော့ ပကတိ ငြိမ်သက်နေဆဲ ။ မနက်မိုးသောက်လို့ သွေးစများနှင့် နှလုံးခုန်ရပ်ကာ အသက်ရှူသံတွေ ပျောက်ဆုံး၍ ခွေကာလဲကျနေသည့် သူ့ကို မြင်လျှင် ဘယ်သူတွေ ဘာဖြစ်ကြဦးမှာလဲ...သူ မစဉ်းစားချင်တော့...ဒါ သူတို့နှစ်ယောက်အတွက် ကျွန်တော့်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လက်စားချေမှု ~